မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေက အောင်မြင်မှုအပေါ် ဘယ်လိုလွှမ်းမိုးနိုင်သလဲ ? – Gentleman Magazine
လူတစ်ယောက်အကြောင်းကို သူဘယ်လိုလူမျိုးတွေနဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံလဲဆိုတာကို ကြည့်ပြီး ပြောနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုပါပဲ။ သင်နဲ့အတူအချိန်အများဆုံး ကုန်ဆုံးရသူ (၆)ယောက်ရဲ့ အမူအကျင့်တွေကလည်း သင့်ဆီမှာရှိနေနိုင်ပါတယ်။ သင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ နေတိုင်းထိတွေ့ဆက်ဆံနေရတဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ၊ လုပ်ငန်းရှင်တွေ၊ သက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေကို ကြည့်ပါ။ သူတို့က ဘယ်လိုလူမျိုးတွေလဲ၊ သူတို့ ရပ်တည်မှုက ဘာအတွက်လဲဆိုတာနဲ့ သူတို့ သင့်အကြောင်းဘာပြောကြလဲဆိုတာတွေကို လေ့လာကြည့်ပါ
သင့်ကိုလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့ သင့်ပတ်ဝန်းကျင်က ဘယ်လိုမျိုးလဲ ?
လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းမှာ သင် ဘယ်လိုနေရာမျိုးက ရပ်တည်နေပါသလဲ။ အဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင် အမြဲ ဖြစ်နေတာလား ဒါမှမဟုတ် သင့်ကို အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်နိုင်အောင် တွန်းအားပေးနိုင်သူတွေနဲ့ ၀န်းရံထားနိုင်ပြီးလား ။
သင်က တင်းနစ်ကစားတယ်ဆိုပါစို့။ သင့်ရဲ့အရည်အချင်းတွေတိုးတက်လာဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းက သင့်ထက် တော်တဲ့သူနဲ့ လေ့ကျင့်ကစားဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုကစားခြင်းအားဖြင့် စိန်ခေါ်မှုအသစ်တွေကို ရင်ဆိုင်နိုင်စွမ်းရှိလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သင်နဲ့ လက်ရည်တူသူနဲ့ ကစားမယ်ဆိုရင်တောင် အရည်အချင်းတိုးတက်လာဖို့ မလွယ်ပါဘူး။
အလားတူပါပဲ။ အရည်အချင်းတစ်ခုကို ဖြည့်ဆည်းမယ် ဒါမှမဟုတ် လုပ်ငန်းနယ်ပယ်သစ်တစ်ခုထဲကို ၀င်ရောက်တော့မယ်ဆိုရင် သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်ထဲက အမြင့်ဆုံးပုဂ္ဂိုဟ်ကို ရှာဖွေပါ။ အခြေခံကစတာက ကောင်းပေမယ့် တိုးတက်မှုနှေးကွေးပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အတော်ဆုံးလူကိုရှာဖွေပြီး ပညာယူပါ။
သင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ လက်ရှိဝန်းရံနေသူတွေက သင်ရှာဖွေနေတဲ့ အခွင့်အလမ်းတွေ ဖြည့်ဆည်းပေးပြီး နောက်ထပ်တဆင့်တက်လှမ်းဖို့ ကူညီပေးနိုင်ပါသလား ပြန်သုံးသပ်ပါ။ သင်နဲ့ သိပ်မကွာသူတွေနဲ့ပဲ ထိတွေ့ဆက်ဆံနေရမယ်၊ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနေရမယ်ဆိုရင် သူတို့တွေက သင့်ကိုနောက်တဆင့်တက်လှမ်းဖို့ ကူညီပေးနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သင်ရှာနေတဲ့ အခွင့်အလမ်းတွေကိုလည်း ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒါက စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အမျိုးသမီးတွေမှာဆိုရင် ပိုသိသာပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေက အမျိုးသမီးသီးသန့် အစုအဖွဲ့တွေနဲ့ပဲ ဆက်သွယ်ချင်တတ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုအစုအဖွဲ့တွေက သီးခြားတန်ဖိုး တစ်ခုရှိနေနိုင်ပေမယ့် တကယ်အခွင့်အလမ်းကို ချပြပေးနိုင်သူတွေနဲ့ အလှမ်းဝေးကွာနေတတ်ပါတယ်။
သင်ကချည်းပဲ အမြဲတမ်းသင်ယူနေလို့ မဖြစ်ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် တတ်နိုင်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာ သင့်ရဲ့လမ်းညွှန်ပြသမှုနဲ့ အကျိုးရှိစေနိုင်သူတွေကို သိထားတာတွေကို ပြန်လည်ဝေမျှကူညီပါ။ ဒီလိုနည်းလမ်းနဲ့ လေ့လာစရာတွေကိုလည်း ပိုမိုသိရှိလာနိုင်သလို ပိုပြီးလည်း ပေးဆပ်ဝေမျှလာနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မိတျဆှအေပေါငျးအသငျးတှကေ အောငျမွငျမှုအပျေါ ဘယျလိုလှမျးမိုးနိုငျသလဲ ?
လူတဈယောကျအကွောငျးကို သူဘယျလိုလူမြိုးတှနေဲ့ ပေါငျးသငျးဆကျဆံလဲဆိုတာကို ကွညျ့ပွီး ပွောနိုငျပါတယျ။ ဒီလိုပါပဲ။ သငျနဲ့အတူအခြိနျအမြားဆုံး ကုနျဆုံးရသူ (၆)ယောကျရဲ့ အမူအကငျြ့တှကေလညျး သငျ့ဆီမှာရှိနနေိုငျပါတယျ။ သငျ့ပတျဝနျးကငျြမှာ နတေိုငျးထိတှဆေ့ကျဆံနရေတဲ့ လုပျဖျောကိုငျဖကျတှေ၊ လုပျငနျးရှငျတှေ၊ သကျဆိုငျရာ ကြှမျးကငျြပညာရှငျတှကေို ကွညျ့ပါ။ သူတို့က ဘယျလိုလူမြိုးတှလေဲ၊ သူတို့ ရပျတညျမှုက ဘာအတှကျလဲဆိုတာနဲ့ သူတို့ သငျ့အကွောငျးဘာပွောကွလဲဆိုတာတှကေို လလေ့ာကွညျ့ပါ။
သငျ့ကိုလှမျးမိုးနိုငျတဲ့ သငျ့ပတျဝနျးကငျြက ဘယျလိုမြိုးလဲ ?
လုပျငနျးခှငျအတှငျးမှာ သငျ ဘယျလိုနရောမြိုးက ရပျတညျနပေါသလဲ။ အဖှဲ့ရဲ့ခေါငျးဆောငျ အမွဲ ဖွဈနတောလား ဒါမှမဟုတျ သငျ့ကို အကောငျးဆုံးစှမျးဆောငျနိုငျအောငျ တှနျးအားပေးနိုငျသူတှနေဲ့ ၀နျးရံထားနိုငျပွီးလား ။
သငျက တငျးနဈကစားတယျဆိုပါစို့။ သငျ့ရဲ့အရညျအခငျြးတှတေိုးတကျလာဖို့ အကောငျးဆုံးနညျးလမျးက သငျ့ထကျ တျောတဲ့သူနဲ့ လကေ့ငျြ့ကစားဖို့ပဲဖွဈပါတယျ။ ဒီလိုကစားခွငျးအားဖွငျ့ စိနျချေါမှုအသဈတှကေို ရငျဆိုငျနိုငျစှမျးရှိလာမှာ ဖွဈပါတယျ။ သငျနဲ့ လကျရညျတူသူနဲ့ ကစားမယျဆိုရငျတောငျ အရညျအခငျြးတိုးတကျလာဖို့ မလှယျပါဘူး။
အလားတူပါပဲ။ အရညျအခငျြးတဈခုကို ဖွညျ့ဆညျးမယျ ဒါမှမဟုတျ လုပျငနျးနယျပယျသဈတဈခုထဲကို ၀ငျရောကျတော့မယျဆိုရငျ သကျဆိုငျရာနယျပယျထဲက အမွငျ့ဆုံးပုဂ်ဂိုဟျကို ရှာဖှပေါ။ အခွခေံကစတာက ကောငျးပမေယျ့ တိုးတကျမှုနှေးကှေးပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ အတျောဆုံးလူကိုရှာဖှပွေီး ပညာယူပါ။
သငျ့ပတျဝနျးကငျြမှာ လကျရှိဝနျးရံနသေူတှကေ သငျရှာဖှနေတေဲ့ အခှငျ့အလမျးတှေ ဖွညျ့ဆညျးပေးပွီး နောကျထပျတဆငျ့တကျလှမျးဖို့ ကူညီပေးနိုငျပါသလား ပွနျသုံးသပျပါ။ သငျနဲ့ သိပျမကှာသူတှနေဲ့ပဲ ထိတှဆေ့ကျဆံနရေမယျ၊ တိုငျပငျဆှေးနှေးနရေမယျဆိုရငျ သူတို့တှကေ သငျ့ကိုနောကျတဆငျ့တကျလှမျးဖို့ ကူညီပေးနိုငျမှာ မဟုတျပါဘူး။ သငျရှာနတေဲ့ အခှငျ့အလမျးတှကေိုလညျး ဖွညျ့ဆညျးပေးနိုငျမှာ မဟုတျပါဘူး။
ဒါက စိနျချေါမှုတဈခုဖွဈပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ အမြိုးသမီးတှမှောဆိုရငျ ပိုသိသာပါတယျ။ အမြိုးသမီးတှကေ အမြိုးသမီးသီးသနျ့ အစုအဖှဲ့တှနေဲ့ပဲ ဆကျသှယျခငျြတတျကွပါတယျ။ ဒီလိုအစုအဖှဲ့တှကေ သီးခွားတနျဖိုး တဈခုရှိနနေိုငျပမေယျ့ တကယျအခှငျ့အလမျးကို ခပြွပေးနိုငျသူတှနေဲ့ အလှမျးဝေးကှာနတေတျပါတယျ။
သငျကခညျြးပဲ အမွဲတမျးသငျယူနလေို့ မဖွဈပါဘူး။ ဒါ့ကွောငျ့ တတျနိုငျတဲ့အခြိနျတိုငျးမှာ သငျ့ရဲ့လမျးညှနျပွသမှုနဲ့ အကြိုးရှိစနေိုငျသူတှကေို သိထားတာတှကေို ပွနျလညျဝမြှေကူညီပါ။ ဒီလိုနညျးလမျးနဲ့ လလေ့ာစရာတှကေိုလညျး ပိုမိုသိရှိလာနိုငျသလို ပိုပွီးလညျး ပေးဆပျဝမြှေလာနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။
Previous: သင်္ချာ ဥပဒေသလေး တစ်ခု
Next: အရပ်ပု တဲ့ အမျိုးသားတွေအချစ်ရေးမှာ အဆင်ပြေစေဖို့